Halkan Kaga Bogo Macalinkii Ugu Fiicnaa Klopp, Mourinho, Guardiola Iyo Ancelotti Horyaalka PL? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Dabcan tababarayaasha ugu fiican dunida kubadda cagta abid ayay kuwo badan oo kamid ahi haatan ku dhex jiraan ciyaaraha iyagoo samaynaya taariikhahooda u gaarka ah isla markaana maamulaya kooxo horyaalo kala duwan ka yagleelan.
Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp, Jose Mourinho iyo Pep Guardiola oo kamid ah tababarayaasha haatan ugu wanaagsan kubadda cagta ayay shabakada WhoScored.com soo xushay shaxaha ugu fiican ee ciyaartoyda ay abid soo tababareen.
Aan ku bilawnee tababare Jurgen Klopp oo labada kooxood ee ugu tayada fiican ee uu soo layliyay ay yihiin Borussia Dortmund iyo Liverpool ayaa booska goolhayaha loogu xulay Alisson Becker oo ay hadda wada joogaan Anfield.
Daafacyadiisa dhexe ayaa laga dhigay Van Dijk oo qudhiisu Liverpool la jooga iyo Mats Hummels oo ay Dortmund kusoo wada qaateen halka labada daafac garab ay ugu soo baxeen Alexander Arnold iyo Robertson oo labadooduna Liverpool qayb ka ah.
Saddexleyda khadka dhexe ayaa ah Nuri Sahin oo bur-buriye loo dooray kana soo hormaray Henderson iyo Fabinho halka Mario Gotze iyo Coutinho ay la midaysan yihiin.
Saddexda hore ee tababare Klopp loosoo dooray ayaa laga waayay Mane waxaana lasoo doortay Reus oo qiimaynta ugu sarreysa shaxdan ugu jira, Mohamed Salah iyo Robert Lewandowski.
Dhinaca kale Guardiola ayaa goolhaye ahaan loogu xulay Manuel Neuer iyadoo daafacyadiisa dhexe ay noqdeen Mascherano iyo Boateng halka ay labada garab daafac u yihiin Dani Alves iyo David Alaba.
Khadka dhexe ee shaxda ugu fiican ee tababare Pep ayaa ah mid xoogan oo ay ku midoobeen Xavi Hernandez iyo Kevin de Bruyne halka garbaha ay joogaan Arjen Robben iyo Frank Ribery.
Labada weeraryahan ee shaxdan ayaa ah Robert Lewandowski oo Klopp qudhiisa ugu jiray iyo Lionel Messi oo ay waayo dahabi ah soo wada qaateen Pep.
Aan u leexanee tababare Carlo Ancelotti ayaa goolhayihiisii ugu wacnaa Petr Cech iyadoo labadiisa daafac dhexe ay yihiin Sergio Ramos iyo John Terry halka garbaha daafacu ay yihiin Ivanovic iyo Marcelo Vieira.
Dhexda shaxdan yaa kala ah Frank Lampard iyo Thiago Alcantara halka ay garbaheedu yihiin Gareth Bale iyo Cristiano Ronaldo iyo labada weeraryahan oo ay kusoo kala baxeen Didier Drogba iyo Zlatan Ibrahimovic.
Ugu dambayn, tababare Jose Mourinho oo ay isku shax dhaw-dhaw yihiin Ancelotti ayuu sidoo kale booska goolhayaha u yahay Petr Cech isagoo labada daafac dhexe looga dhigay Pepe iyo Sergio Ramos halka daafaciisa garbuhu uu yahay Ivanovic iyo Marcelo.
Khadka dhexe ee shaxda Special One ayay soo galeen Paul Pogba oo uu Man United kusoo maamulay iyo xiddigihiisii Real Madrid ee Xabi Alonso iyo Mesut Ozil.
Saddexda weeraryahan ee shaxdan ayaa noqday Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo iyo Gonzalo Higuain oo uu dhammaantood kula soo shaqeeyay Real.
Si kastaba, ka akhriste ahaan shaxdee adiga kuula muuqata mida ugu xoogan haddiiba aad kala dooran lahayd afartan shaxood, aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee faalada.